युएईमा ३ नेपालीलाई ८ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद उपहार « Online Tv Nepal
युएईमा ३ नेपालीलाई ८ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद उपहार
Published :9June, 2018 12:12 pm
On : प्रवास
युएई – युएई एक्सचेन्जबाट घरमा पैसा पठाउँदा युएईमा तीन नेपालीले नगद उपहार पाएका छन् । एक्सचेन्जद्वारा सञ्चालित ‘धेरै जीतौँ, ठूलो धनराशि जीतौँ’ योजनामा अहिलेसम्म तीन नेपालीले प्रतिव्यक्ती २५ सय डलर अर्थात २ लाख ७० हजार रुपैयाँ पाएका हुन् ।
पछिल्लो पटक बिहीबार आबुधाबीको मुसाफा आइकार्ड मजदुर क्याम्प शाखाबाट नेपाल पैसा पठाउँदा रुपन्देहीका शेखर भुषाल मे महिनाको विजेता बन्नुभएको हो । नगद पुरस्कार विहीबार प्रदान गरिएको युएई एक्सचेन्जका नेपाल बजार प्रमुख सन्तोष प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँ तेस्रो पटकको बिजेता हुनुहुन्छ । आबुधाबी मफ्रक मजदुर क्याम्प शाखाबाट धनुषाका गणेश कपारी केवटले पहिलो पटक पुरस्कार पाउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, दुवईमा रहेको अलरिगा शाखाबाट पैसा पठाउँदा काठमाडौंकी सरला केसीले नगद उपहार पाउनुभएको थियो । पहिलो पल्ट विजेता बनेका केवट १६ वर्षदेखि आबुधाबीको आर्को इन्टरनेशनल कम्पनीमा ८ सय तलबमा मजदुरी गर्दै आउनु भएको छ ।
दोस्रो बिजेता काठमाडौंकी सरला अहिले छुट्टिमा नेपाल गएकाले उहाँ युएई फर्किएपछि प्रदान गरिने एक्सचेन्जका नेपाल बजार प्रमुख प्रसार्इंले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
युएई एक्सचेन्जको यो योजना अन्तर्गत हरेक दिन २५ सय डलर ,साप्ताहिक ५ हजार डलर र मेघा पुरस्कार अन्तर्गत १ लाख डलरको पुरस्कार राखिएको छ । यो योजना जुन १६ सम्म चल्ने छ ।
पाथिभरा माताको दर्सन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस ! तपाइको भाग्य कस्तो ?
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) न्यून पारिश्रमिकमा दिनभर काममा व्यस्त हुनुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । आर्थिक अभावले महत्वपूर्ण कामहरु
लघुकथा ” प्रेममा जात ” जातपातको विभेद कहिले सम्म किन यस्तो के राखेछ जात मा ? परदेशी भुमि बेलजियमबाट समाजसेबी यसोदा थापा यशु को मन नै रुवाने लघुकथा ” प्रेममा जात ” onlinetvnepal
लघुकथा ” प्रेममा जात ” जातपातको विभेद कहिले सम्म किन यस्तो के राखेछ जात मा
अमेरिका बाट आयो बिहानै दुखद खबर: अमेरिकामा ट्रकको ठक्करबाट एक नेपाली बालकको मृत्यु
न्यूयोर्क – अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरस्थित कोरोनामा ट्रकको ठक्करबाट एक दश बर्षिय नेपाली बालकको मृत्यु भएको
श्रीमतीसँग कुरा गर्दागर्दै गोली चल्यो, अनि फोन अफ भयो , जम्मु कश्मीरमा नेपालीको मृत्यु : लाहुरे त बने, खुसी टिकेन
काठमाडौँ – नयाँ वर्षको पहिलो दिन मङ्गलबार भारतको जम्मू कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा परी गोरखा
स्वस्थ रहन दैनिक कसरी र कति पानी पिउने ?
सामान्यतः पानी तिर्खा लाग्दा मात्र पिउने गरिन्छ। तिर्खा लाग्नु भनेको शरीरले पानीको आवश्यकता भएको संकेत
क्षेत्रीले तस्वीर खिचे, दुई पल्सर भाइरल
काठमाडौँ : बुधबार बिहान साढे ८ बजेतिर प्रदीपजंग क्षेत्री गौशाला चोकमा ट्राफिक जाममा अड्किरहेका थिए
यस कारण सबै फेल भएछन् त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले लिएको प्रशासनिक तथा प्राविधिकतर्फको १०२ पदको परीक्षामा सबै परीक्षार्थी
यस कारण सबै फेल भएछन् त्रिवि सेवा आयोगले लिएको
तीन दशकदेखि बस्ती पहिरोको त्रासमा